Dakhli dheeri ah oo lagu heshiiyey iney helaan waalidiinta fasaxa gala - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dakhli dheeri ah oo lagu heshiiyey iney helaan waalidiinta fasaxa gala
La daabacay onsdag 17 april 2013 kl 14.30
Wixii laga bilaabo sannadka foodda innagu soo haya ayey shaqaale badani xaq u yeelan doonaan iney helaan dakhli ka sarreeya midka iminka kolka ey galaan fasaxyada dhallaanka loo qaato. Iyada oo is-bedelka ugu ballaaran uu ku dhici doono shaqaalaha xubnaha ka ah ururka shaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno LO oo kor loo qaaday lana gaarsiiyey lix bilood halkii ey horey uga aheyd laba bilood muddada ey dakhliga dheeriga ah ku heli karaan kolka ey dhallaanka guryaha fasax ugula jiraan, sida ay sheegtay laanta wararka ee Ekot.
Dakhligan dheeriga ah ayaa gaarsiisan 10% bishii illaa iyo ugu badnaan 37 000 oo koron oo loo qeeybiyey 180 maalmood. Middaasi ayey macnaheedu tahay guud ahaan 15 000 oo koron cidda mushaarkeedu yahay 25 000.
Dakhligan dheeriga ah ayaa ah miisaaniyadda uu qofka shaqaalaha ahi ka heli karo shaqa-bixiyaha kolka laga reebo dakhliga ka soo gala hayadda ceeymiska bulshada ee försäkringskassan. Iyadoona heshiis ey ku wada gaareen ururka shaqaalaha LO iyo ururka manaafacaadku in dhammaan shaqaalaha ka howl-gala shirkadaha madaxa-bannaan ey xaq u yeelan doonaan dakhli dheeri ah muddo lix bilood ah laga bilaabo horraanta sannadka foodda innagu soo haya.
Farkhiga ugu ballaaran ayuu saameeyn doonaa tusaale ahaan shaqaalaha nadaafadda, kuwa maqaayadaha ka howl-gala iyo dareewallada.
Kolka laga yimaado xubnaha ururka shaqaalaha ee LO ayaa muddo bil ah lagu saa'idiyey lana gaarsiiyey lix bilood muddad ey dakhliga dheeriga ah ku heli karaan fasaxa ey dhallaankooda u qaataan shaqaalaha ka howl-gala warshadaha, saraakiisha shaar-cadda iyo qaar badan ee ka mid ah jaamiciyiinta.
Hase yeeshee ay caalimadda dhaqaalaha qaran Gabriella Sjögren Lindquist kuna takhahasustay culuunta heshiisyada ceeymisku sheegtay in heshiiysadaasi aaney haba-yaraatee wax ku kordhineyn nidaamka sinnaanta ee qooyska:
- Saameeyn yar way ku yeelan kartaa maadaama aabbeyaasha lagu dhiiri-gelineyo inuu dakhli dheeri ah ku soo gelayo. Hase yeeshee waxay saameeynta ugu ballaaran ku yeelan lahayd haddii ay middaasi wax ka bedeli lahayd kolka uu qooysku amuurtaa kaga xaajooneyo guriga, miiska qadada dushiisa iyo cidda fasaxa u qaadanaysa dhallaanka. Una maleeyn maayo in dakhligan dheeriga ahi uu middaa saameeynayo, sida ay sheegtay.